U-Ellicott Dredger Usiza ngePalermo Port yaseColombia - I-Ellicott Dredges
U-Ellicott Dredger Usiza ngePalermo Port yaseColombia
Ukutholakala kwamachweba kubalulekile ekungeniseni nasekuthumeleni ngaphandle kwezimpahla emhlabeni jikelele. Lapho ithrafikhi incipha ngenxa yokudangala kanye nokunye okwakha, I-Ellicott Dredges ikhambi.
An I-Ellicott 670-42 Dragon® Dredge ibithengiwe futhi manje isisetshenziselwa ukwehlisa iPalermo Port eMnyangweni waseMagdalena eColombia.
AbakwaCoremar Group, abangabanikazi bePalermo Port Cluster neRetramar (ababesebenza ethekwini), bayaleza futhi bathola imvume yokuba benze lo msebenzi wokudonswa kwemifula wokwakha nokulungisa izakhiwo zawo zezimboni.
Ama-dredger asetshenziswa esikhathini esidlule ukugcina okusalungiswa kwedokodo echwebeni. Kodwa-ke, i-Ellicott 670 dredge yemodeli inokumba okungamamitha angama-42 (ukujula okungamamitha ayi-13.5), okukukhulu kune-ejwayelekile ngamamitha angama-36 (amamitha ayi-11). Ngenxa yalokhu, i-Coremar inganciphisa imvamisa ye-dredging ne-Ellicott dredge entsha.
UJorge Castellanos, uMongameli weCastec - othengise ubukhosi futhi omele u-Ellicott eColombia amashumi amabili eminyaka - uthe abanikazi bamachweba bavame ukuqasha indawo lapho kudingeka khona, kepha ukuba ngumnikazi wayo kuqinisekisa ukuthi amadokodo abo ahlala esesimweni esihle.
“Amachweba eColombia ayakhula futhi kumele athole futhi ahambise imikhumbi enezimpahla eziningi, ezivela emazweni ahlukahlukene,” kusho yena. "Uhlaka lwamachweba abo wumsebenzi wabo okusho ukuthi imvamisa kufanele baqashe izindawo zokuhlala ukuxazulula lesi simo."
Amanye amachweba azungeze iPalermo anezinkinga ezifanayo ngokwakhiwa kokudilizwa, kanti iDragon® Dredge ibhekwa njengesixazululo saphakade kulezo zinkinga.
"Ukuba nezindawo zabo zokuhlala kuqinisekisa ukuthi (abanikazi bamachweba) bayakwazi ukugcina ukusebenza kwabo, manje njengoba banegama elihle le-Ellicott Dredges besebenza eduze kwamachweba abo, banethuba elihle lokuxazulula inkinga," kusho uCastellanos. "Abanye babanikazi bamanye amachweba abasondele kithina, bethola lokhu mayelana ne-670-42 dredger ePalermo Port."